Ndifumana njani i-backlink ephezulu ye-PR GOV?
Ukufumana i-Pagerank ephakamileyo i-GOV backlinks inokuphakamisa amanqanaba ewebhusayithi yakho ngokubanzi. Qaphela, nokuba kunjalo, ukufumana kwabo kuyimfuneko inzima kwaye ichitha ixesha. Kwaye, ke, abanye abantu basoloko bathi iGoogle ayinakuyiphatha loo dot dot okanye i-GOV backlinks nayiphi na indlela eyahlukileyo. Nangona kunjalo, isabelo seengonyama okanye iinkqubo zangempela kwi-SEO zicinga ngenye indlela. Ngoba? Kulungile, makhe sicinge ukuba i-Google ayiboni into engcono kunezinye iindawo eziyaziwayo (e. g. , i-dot COM, i-dot NET, okanye i-ORG enefuthe). Nangona kunjalo, umgangatho ophezulu wegunya le-GOV backlinks kufuneka ubanike ubunzima obongezelelweyo namandla, ngokukodwa kwimbono yoPhando lweeNjini zoPhando.
Ngoko, ukungahoyi ukuba akukho ncazelo esemthethweni enikezwe yiGoogle okwangoku, ukubaluleka okuphezulu kweeteksi ze-GOV backlink akufanele kushiywa. Enyanisweni, ziyabonwa yizona zininzi ze-SEO pros njenge-grail engcwele yesakhiwo esinxulumene nesixhobo esinamandla, kuba zivame ukuvela kwiiwebhusayithi ezithembekileyo kunye nezona.
Ngoko, kuthekani malunga nexabiso langempela le-SEO ye-dot backlink? Ewe, akukho mandla amakhulu. Kodwa mhlawumbi ukusikisela okungaqhelekanga kusekunjalo kwinqanaba elithile. Yaye ke, nayiphi na iwebhusayithi okanye iblogi ingafumana ngaphandle kokubandakanya ezo zikhokelo kwiiprofayili zabo, kwaye zihlala zihle kakhulu kwiGoogle. Ndiyathetha ukuba ukuba unethamsanqa ukufumana i-dot back extras, i-website yakho okanye iblogi iya kuba nethuba elifanelekileyo lokuhlala ukhuphiswano, ngenxa yesigunya sakho esinamandla. Ngoko, ukuqwalasela ukubaluleka kwabo kwi-SEO apha kuza ingxaki - kunzima kakhulu ukufumana unxibelelwano kunye nokuveliswa kwesizinda kunye nemithombo ye-intanethi ephethwe nguorhulumente ngokwawo okanye nayiphina isiseko esisemthethweni. Into eyokuba abayi kudibanisa nabani na ngaphandle kwesizathu, okanye ngaphandle kwesizathu esilungileyo.
Njengoko ndithe ndatsho, ukufumana i-backlinks ka rhu lumente ngumsebenzi onzima kunye nokuchitha ixesha. Kodwa kuseyona nto ifanelekileyo, njengoko ihlala ihlawulela kakuhle - ngokuqinisekileyo ingcono kunezinye i-backlinks, nakwiiwebhusayithi ezilungileyo zePagerank okanye kwiindawo eziphezulu zamagunya. Ngoko, ngaphambi kokuba uqalise, qiniseka ukuba unakho konke okukhoyo. Ndiyathetha ukuba i-website yakho ekhoyo okanye ibhloko lephepha lebhulogi limele libe yinkcazelo ngokufanelekileyo, echaphazelekayo kwisifundo esiyintloko kunye nokunikezela ixabiso elikhulu kubantu bangempela. Ngaphezu koko, iphepha lakho lewebhu kufuneka lenziwe ngokufanelekileyo malunga neSOO kwisiza ekubhenkeleni ngokusisiseko kwezo ziseko zezopolitiko kunye neziza zabo ezisemthethweni.
Okokuqala nokuphambili, qiniseka ukuba iphrofayli yangoku ye-backlink yewebhusayithi yakho isele iphethe iiprogram eziphezulu ze-PR, i-PA kunye ne-DA.Ngale ndlela, uya kuba mnandi ukufumana ezo zinto zixabisekileyo. Ukwenza njalo, ungakulibali ukuba ube ngumgqugquzeli wezoshishino uhlala ulungile kuwe-nangaphandle komsebenzi wethu-ukuphakamisa igunya lakho eliqinileyo kunye nobuchule obufanelekileyo obufunekayo ekutsaleni i-GOV backlinks, mhlawumbi ukusuka kwimithombo ehloniphekileyo kwaye ethembekileyo kwiWebhu.
Ukukhangela amaSayithi afanelekileyo
Emva kokuba uqinisekise ukuba yonke into enewebhu okanye iblogi yakho isendaweni, lixesha lokufumana iiwebhsayithi ezifanelekileyo zoluntu ukuze zidibanise kunye. Into ekhoyo kukuba kukho ezininzi izandiso zesizinda, kunokuba kubalwe ubuninzi beziseko ezinxulumene nemibutho esemthethweni. Kuthetha ukuba akude yonke imithombo ye-intanethi kunye neenkcukacha zeDGOV zifumana nantoni na oorhulumente bokwenene. Ngoko, ukukhangela iindawo ezifanelekileyo, kuya kufuneka ukuba ube ne-check-check on their legitimacy. Sinokufumana njani ii-arhente zangempela kunye neminye imithombo efanelekileyo? Ndicebisa ukukhangela nge "indawo:. gov "i-modifiers ehambileyo ukuze ukwazi ukubeka ingqwalasela echanekileyo.
Ukuphawula kwii-Top blogs ezichaphazelekayo / iiWebhsayithi
Ewe, ukushiya izimvo kwiiblogi zikaRhulumente kunye newebhsayithi yenye yeendlela ezilungileyo zokufumana ezo zixhobo ezixabisekileyo ze-GOV backlinks. Ngokuqinisekileyo, ngokungafani nokuphawula kwenye indawo ukuba ufumane i-backlinks ngokubuyisela, loo nto yayiba ngumsebenzi onzima kakhulu. Kodwa kuseyona ndlela esetyenziswa ngayo kakhulu yokugqiba umsebenzi, ngoko ndincoma ukuba ndizame phambi kokunye.
Ngoko, into leyo kukuba isabelo seengonyama kwiiwebhusayithi ze-urhulumente okanye kwiiblogi azikho indawo yokunika ingxelo. Ngaba kufuneka benze okukhethiweyo nangoko, ukhetho lwabo lwamazwana luyakwazi ukuza ngeNewFollow. Kuthetha ukuba uya kufuneka uhlawule ixesha kunye nomzamo wokufumana indawo efanelekileyo okanye iblogi ezingenayo. Nangona inyaniso yokuba amathuba akho okwenene okufumana iiprogram ze-PR eziphezulu ze-GOV backlinks zinokuba zincinci, ukushiya izimvo kulungile. Qinisekisa ukuba ukuphawula kwakho kufanelekileyo kwaye kuyabaluleka kwaye kuza ngaphandle kokupaka.
Ngethuba elingcono lokufumana iindawo ezivumela i-DoF ukulandela izimvo, ndincoma ukusebenzisa "indawo:. gov inurl: iblogi. "Ukongeza, ngaphandle kokuzama ukufumana i-GOV backlinks kwiinkcazo, ungasebenzisa ezinye izinto. Akunjalo, nokuba kunjalo, uya kulufuna umxholo omkhulu kunye okhuthazayo. Ngoko, masibe nomboniso omfutshane apha ngezantsi.
Zama ukubhala ngenye yezi zinto zilandelayo:
I-Arhente kaRhulumente-bhala inqaku elinqumlekileyo, uthengise kakuhle kwaye emva koko uzazise i-arhente. Ukubonisa oko, makhe sicinge ukuba uqhuba inkampani ejongene namandla angaphinda ahlawulelwe, okanye umzekelo, uyinkontileka yasekhaya esebenzayo. Ngaloo ndlela, konke okufunayo apha kukudala ingxoxo yeposi yeblog okanye inqaku elipheleleyo elizinikezelwe kwi-Ofisi yeMandla eNamandla avuselelekayo kunye nokuPhumelela kwamandla.Ipro tip: ukujoliswa kwabaphulaphuli belizwe jikelele kuyindlela enhle yokufikelela kumashishini karhulumente karhulumente.
Wezopolitiko - njengendlela yokugqibela yokubhalwa kwinqaku malunga ne-arhente karhulumente, ukhululekile ukwenza uhlolo-nkcukacha okanye ubhale ngombhali owaziwayo okanye umntu ojongana nayo nayiphi na imicimbi esemthethweni echaphazelekayo echaphazela ishishini lakho. Musa ukuzibamba ixesha kunye nemizamo ngokubhala malunga nethuba leminye imigaqo ephakanyisiwe, umzekelo, ochaphazelekayo kwisifundo sakho esithile soshishino okanye iinkalo eziphezulu eziphezulu zorhwebo.Yenza nje inqaku eliqineleyo kwaye lidibanise naloo mbono wezopolitiko okanye umntu ojongene naloo nto. Emva koko, xelela abaphathi abanomdla malunga nompapasho wakho omtsha.
I-Arhente yoTywala - khetha isihloko esifanelekileyo kunye nodliwano-ndlebe kwilungu elimiselweyo likarhulumente wengingqi. Ngokuqhelekileyo, uya kuvunyelwa ukuba ube nodliwano-ndlebe, ngokuqinisekileyo unikezelwa ukuba unesihloko esifanelekileyo kwingxoxo. Ngaloo ndlela, uya kukwazi ukwenza ipapasho kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi ngesikhonkco, esichazela eloo rhu lumente. Qaphela ukuba ngamanye amaxesha umntu o dliwano-ndlebe okanye i-arhente karhulumente angakwazi ukwabelana ngodliwano-ndlebe nabo. Ukuba kwenzeka njalo, uya kuba novuyo oluthile lwamacandelo e-GOV backlinks, ngaphandle kwesiqalo sakho sokuqala.
Yenza uQhagamshelwano olutsha - uzama ukufumana unxibelelwano olongezelelweyo okanye ukubeka intsebenziswano noorhulumente omtsha unokuba yindlela enokulinganayo yokufumana amanqaku amaninzi kwi-GOV backlink kunye nePagerank ephezulu. Ewe, akusoloko ilawulwayo - kuba yonke into apha iya kuxhomekeka kakhulu kwiziko lakho lewebhu okanye iblogi. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kuya kuba yithuba elungileyo lokwenza umnxibelelwano olongezelelweyo urhulumente. Ngaphantsi naziphi na iimeko, ukuphuhlisa ukukhutshwa kwe-press kunye ne-backlink kwi-arhente kusekufanele ukudubula. Ngale ndlela, gcinani engqondweni ukuba ukudala ubambiswano kunye ne-arhente karhulumente nayo yinto ezuzisa kakhulu. Ngokufanelekileyo, oku kungakhokelela kumaphepha abo aseburhulumenteni bahlala bedibanisa kwiwebhusayithi yakho ebalulekileyo yoshishino okanye ibhulogi exhasa.
Ukuthatha inxaxheba kwi-Outreach - usenokusebenza kwakhona ekudaleni iphepha lokuncedisa ngamathuba amaninzi, okanye uzama ukufakwa kwiphepha elithile lamacandelo kwishishini lendawo. Unokuzibeka ngokwakho, umzekelo ukwenza izipho zothando ukuba zifakwe kuhlu kwizinto ezixhamliweyo kunye nekhonkco ebalulekileyo ebonisa iwebhusayithi yakho okanye iblogi.
Isitrafti - ukubethelela i-website yeburhulumenteni isoloko ifumana ezo zinto zixabisekileyo. Mane ufunde okungakumbi malunga neengxaki ezibuhlungu kakhulu ze-arhente ka rhu lumente kwaye wenze nje isithuba sokuxelela into efuna ukuyiva. Ngokuqinisekileyo, ayikwazi ukuba yindlela eqinisekileyo yokufumana i-dot ye-GOV backlinks eyongezelelweyo, kodwa ukuba uvakalelwa indlela efanelekileyo yeklasi-eli cwangciso lisebenza kakuhle. (40)
Emva koko, kuya kufuneka uqinisekise ukuba i-backlinks yakho entsha ye-GOV ayiyingozi. Ndiyathetha ukuba kuya kukhankanya kwiGoogle xa iphrofayli yakho yekhonkco okanye iblogi iphucuka ngokukhawuleza kunye nezixhumanisi ezininzi zikaRhulumente. Ngoko, ndincoma ukuba uhlolwe kabini kwi-backlink yonke esandul 'ityenziswe kusetyenziswe nayiphi na isistim ekhompyutheni ye-intanethi yesakhiwo soqhagamshelwano kunye nophando. Phakathi kwabanye, ndafumana i-Open Site Explorer, i-Semalt Analyzer, kunye ne-Screaming Frog njengoluncedo ngakumbi ekusebenzeni ukuhlalutya ngokupheleleyo kwiprofayili ye-blog yangasemva Source .Qhubeka usebenza ngokuqhubekayo, kunye nenhlanhla!